“देशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटन नै मुख्य क्षेत्र हो”
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका तारानगरमा जन्मिएका सुवास मल्ल एनआरएनए साइप्रसका अध्यक्ष हुन् । धनगढीकै निलम विद्या निकेतनबाट एसएलसी गरेका मल्ल सुदुरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीबाट प्लस टु, काठमाडौंको किस्ट कलेजबाट व्याचलर एण्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी सकेर उच्च शिक्षाका लागि साइप्रस पुगे । उनले साइप्रसकै कलेजबाट होटल म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा गरी युरोपियन युनिभर्सिटीबाट हस्पिटालिटी म्यानेजरको कोर्ष गरेका छन् । एनआरएनए साइप्रसका अध्यक्षसमेत रहेका मल्लसँग गरिएको कुराकानी ः
साइप्रस किन र कहिले पुग्नुभयो ?
कैलालीबाट काठमाडौँ आएपछि कमलपोखरीमा रहेको किस्ट कलेजबाट व्याचलर एण्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी गरेको थिएँ । त्यतिबेला विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने रहर थियो । त्यहि रहरले म पनि सन् २००८ मा साइप्रस आएको हुँ ।
साइप्रसमा कति नेपाली हुनुहुन्छ, त्यसमा विद्यार्थी बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि छन् की ?
साइप्रसमा अनुमानित ४५ सय नेपाली रहेका छौँ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरू ४ हजारको संख्यामा हुनुहुन्छ । त्यस्तै विद्यार्थी २ सय, उद्योग क्षेत्रमा १ सय र अरु फार्मिङ क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अर्को कुरा यहाँ नेपाली लाहुरे परिवार पनि हुुनुहन्छ । उहाँहरू आर्मी क्याम्पभित्र रहनु भएकोले कतिको संख्यामा हुुनुहुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
महिला दिदीबहिनीहरूको कस्ता समस्या पाउनु भएको छ ?
साइप्रसमा आउनु भएका महिला दिदीबहिनीहरूको मुख्य समस्या भनेको भाषाको समस्या हो । यहाँ ग्रिक भाषा बोल्ने हुनाले रोजगारदाता र कामदारकाबीच ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । अर्को ठूलो समस्या नेपालमा दलालले देखाएको सम्झौतापत्रमा यति घण्टा काम गर्ने भनेर लेखिए पनि हाउसमेडमा त्यस्तो सम्झौता लागू हुँदैन् । त्यसैले बढी समय खटिनु पर्दा दिमागी प्रेसर बढी हुने, समयमा तलब नदिने, सम्झौतापत्रमा लेखिए भन्दा थोरै तलब दिने, भाषाका कारण आफ्ना समस्या प्रस्ट राख्न नसक्दा भिसाको अवधि भन्दा अगावै अबैधानिक भएर बाहिर निस्कने, छोटो समयमै देश फर्कनुपर्ने लगायतका समस्या छन् ।
एनआरएनए साइप्रसले नेपालीका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने गरेको छ ?
यहाँ नेपालीहरूको संख्या दिनहुँ बढीरहेको छ भने त्यहि अनुसार समस्याहरू पनि बढ्दै गएका छन् । दलाल, रोजगारदाताबाट ठगिएको भन्दै आउनेहरूका समस्या हामी फोनबाटै समाधान गर्ने गछौँ । रोजगारदाताको घरमा समस्या परेकाहरूलाई घर परिवर्तन गर्न सघाउने गर्छौ । हामीले समाधान गर्न नसकिने समस्या भए साइप्रसका कन्सुलेटसँग समन्वय गरेर समाधान
गर्दै आएका छौँ ।
साइप्रसमा नेपालीहरूका लागि के कस्ता रोजगारीका सम्भावना देख्नु भएको छ ?
नयाँ देश र नयाँ परिवेशमा पुग्दा सुरुमा जुन देशमा पनि समस्या हुन्छ । तर यहाँ चुनौतीसँगै सम्भावना पनि छन् । यहाँ मुख्यतः हाउसमेड, केयरगिभर र फार्मिङका साथै होटल इण्डिस्ट्रिजमा रोजगारीको सम्भावना बढी छ ।
नेपालीहरू व्यवसायमा पनि छन की ?
हो, यहाँ नेपालीहरूले व्यवसाय पनि गर्नु भएको छ । विशेष गरेर नेपालीहरूको मुख्य व्यवसाय अडिट फर्म, ट्राभल्स एण्ड टुरिजम लगायत हुन् ।
साइप्रसबाट नेपाल र नेपालीहरूले सिक्नु पर्ने कुराहरू ?
साइप्रसका नागरिकबाट धेरै सिक्न सकिन्छ हामीले । यहाँ काम सानो या ठूलो हुँदैन । जस्तो काम र व्यवसायमा लागेपनि कामको सम्मान गरिन्छ अनि मेहनत र लगनका साथ गर्नुपर्छ भन्ने उच्च सोच छ, यहाँका नागरिकहरूको । साइप्रसको आर्थिक स्रोतको मुख्य क्षेत्र पर्यटन हो । नेपाल पनि पर्यटनको सम्भावना भएको देश भएको हुँदा यो कुरा सिक्न सक्नु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
यहाँ एउटा सक्षम युवा हुनुहन्छ देशको आर्थिक समृद्धिका लागि के गर्नु पर्ला ?
मेरो विचारमा नेपालको विकासका लागि मुख्य स्रोत भनेको कृषि र पर्यटनको व्यापक विस्तार र व्यवस्थापन हो । यसको विकास गर्न विशेष जोड दिनमा लाग्याँै भने यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्छ भने धेरैको संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । यसका लागि स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धको मूल आधार उच्च ज्ञान भएको मानव शक्ति, बलियो कर प्रणाली, व्यापारको औद्योगिकीकरण आदि महत्वपूर्ण हुन् ।